हेर्नुहोस २०७८ सालको वार्षिक राशिफल, कुन राशिकाे भाग्य कस्ताे ? (भिडियोसहित) – Halkhabar kura
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार २१:४३
हेर्नुहोस २०७८ सालको वार्षिक राशिफल, कुन राशिकाे भाग्य कस्ताे ? (भिडियोसहित)
-ज्यो. कृष्णप्रसाद काेइराला
यस वर्ष राक्षस नामको संवत्सर रहने छ । ग्रहपरिषद्को गठनलाई विचार गर्दा यस वर्ष राजा र मन्त्री दुबै पदमा मंगल ग्रह रहने छ । यो वर्ष अग्निभय, अल्पबृष्टि, राज्याधिकारीहरूका बीचमा परस्परमा अविश्वास र अराजक स्थितिले जनतामा भय, त्रास र नैराश्यता बढ्ने समय छ ।
जगल्लग्नमा मीन राशि परेको छ, यसको स्वामी बृहस्पति ग्रह वर्षप्रवेशको समयमा व्यय भावमा रहेको कुम्भ राशिमा बसेको छ । लग्नेशबाट केन्द्रीय सम्बन्ध बनाएर तृतीय भावमा बृष राशिमा मंगल र राहुको युतिसम्बन्ध बनेबाट यो वर्ष सरकारको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले पटकपटक नीति र नियमको उल्लंघन गरेको समाचार सुन्न पाइनेछ ।
नेपाल र छिमेकी राष्ट्र भारत र आसपासका देशहरूको भविष्य नियाल्दा यस क्षेत्रमा बुद्धिपक्षभन्दा पनि लहड, एकोहोरोपन र सनक उन्माद हुने परिस्थिति बन्नेछ ।
जनताका सुखदुःख र आवश्यकताका विषयमा भन्दा पनि गणितीय र प्राविधिक गठजोड तथा दमन, उत्पीडन र प्रशासनिक तानाबुनाबाट शासन सञ्चालित हुनेछ । देशका सीमाहरूमा युद्ध, संघर्ष र द्न्द्वको बादल मँडारिने समय छ । सीमान्त क्षेत्रमा उपद्रव र आतंकको छाया देखापर्नेछ । प्रशासनिक संयन्त्र बलियो बनाउन सरकारले ठाउँठाउँमा सेना परिचालन गर्ने र निरंकुशता लाद्ने खतरा देखिन्छ । यस क्षेत्रको समुद्री तटमा प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना छ ।
उत्तरी क्षेत्र र हिमालय÷पर्वतीय भूभागमा विनाशकारी आपदा ब्यहोर्नुपर्छ । वर्षाका दृष्टिकोणले समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा वायुवेगका साथमा प्रलयंकारी वर्षा हुनेछ, तर गंगाको मैदानी भूभाग तथा नेपालको तराई क्षेत्रमा खण्डवृष्टि हुनाले कतै बाढीपैह्रो र कतै खडेरीको परिस्थिति बन्नेछ । पर्वतीय क्षेत्रमा बाढीपैह्रोको जोखिम छ भने यस वर्षको हिउँदमा भारी हिमपातको सम्भावनासमेत देखिन्छ । वर्षे बालीका तुलनामा हिउँदेबालीबाट किसानलाई राहत पुग्नेछ ।
पश्चिम नेपालका तुलनामा पूर्वी नेपाल, बिहार, उडिसा, बंगाल, आसाम, बर्मा आदि देशमा धान उत्पादनमा बृद्धि हुनेछ, तर पनि समग्रतामा धानको उत्पादनमा कमी हुनेछ, तर गहुँ, कोदो, जौ, चना, मुसुरो, रहर आदिको उत्पादनमा बृद्धि हुनेछ । कतै अतिवर्षाको प्रकोप र कतै नयाँ रोगव्याधि भित्रिनाले अन्न उत्पादनमा कमी आउनेछ, तर फलफूल र तरकारीको उत्पादनबाट सन्तोष लिन सकिनेछ । यो वर्ष फलाम, मिलमेसिनरी र यान्त्रिक वस्तुको दाममा भारी बृद्धि हुनेछ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बृद्धि हुनाले महँगी आकासिने समय छ । रेशमी र फेन्सी लुगाको मूल्यसमेत बढ्ने संकेत छ ।
सामान्यतया हरेक खाद्यवस्तुको मूल्यमा बृद्धि हुनाले जनता निराश हुनेछन् । खासगरी तेलजन्य पदार्थको मूल्यबृद्धिले उच्चगति समात्ने लक्षण छ । जताततै भ्रष्टाचार, ठगी र लूट हाबी हुने समय हो । छलछाम, चोरी, डकैती आदि समाचारका आम विषय बन्नेछन् । औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउनेछ । पशुचौपाया, बालबालिका र बृद्ध व्यक्तिहरू रोगको फन्दामा पर्नसक्छन् । विश्व परिवेशको फलादेश गर्नुपर्दा पूर्वी गोलार्द्धमा प्राकृतिक प्रकोप, भूइँचालो, सुनामी, उग्रवादी र आतंककारी क्रियाकलाप आदिका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनेछ । त्यस्तै विश्वको दक्षिणीपश्चिमी भूभागमा भुइँचालो, अग्निकाण्ड, यान दुर्घटना र अन्य दैवी प्रकोपको परिस्थिति बन्नेछ ।
विश्वव्यापारमा परिवर्तनका साथै सुधारको संकेत छ । धेरै देशहरूमा महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीको समस्या देखिने छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न संघर्ष र तनावबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । विश्व शेयर बजारमा उतारचढावको समय रहनेछ । ठाउँठाउँमा धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव रहनेछ ।
विश्वका केही राष्ट्रमा पुनः नयाँ रोगको उदय हुनाले जनजीवन अस्तव्यस्त हुनेछ । समग्रतामा यो वर्ष सुख र आनन्दबाट टाढा रहेको वर्ष हो, त्यसैले आम जनसमुदायले सामुदायिक हित र कल्याणको चाहना राखी ग्रहपूजा, दैवी पूजा र उपासना गर्नु÷गराउनु भएमा केही राहत र सुखसन्तोष मिल्नसक्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । त्यसबाहेक देशमा रहनुहुने सबै राष्ट्रप्रेमीहरूले साझा भावनाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म र जनकल्याणप्रति समर्पित भएर कार्यक्षेत्रमा लाग्ने तथा कर्तव्यपालना गरेमा हामी सबैको कल्याण हुने साथै राष्ट्रको समुन्नति हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
Previous कोरोनाले पुरुषहरूको अण्डकोष सखाप !
Next स्पेनमा बनिदैछ विशाल “बौद्ध लुम्बिनी गार्डेन” त्यो पनि १० अर्बको लगातमा (भिडियोसहित)